KIDNAPPING NAHAFATY KANDIDA DEPIOTE : Miisa 7 ireo voasambotra, kandidà mpifaninana aminy ny iray
Olona miisa fito, izay vehivavy ny telo nosamborin’ny kaompanian’ny Zandarimaria tany Tsaratanàna, voarohirohy tamin’ny fakàna an-keriny an-dRakotozafy Haingotiana Bozon Denis Fugan, isan’ny nilatsaka ho mpifaninana amin’ny fifidianana solombavambahoaka, maty novonoin’ireo mpaka an-keriny efa ho herinandro izay. 24 mars 2019
Tsiahivina moa fa ny ampitson’io fakàna an-keriny io, rehefa nisy ny fifanenjehana teo amin’ireo Zandary sy ireo mpaka an-keriny ireo dia tratra ny iray tamin’ireo 3 lahy nandray anjara mivantana tamin’ izany. Ny famotorana natao azy io, no nitarika ny fisamborana ireo 6 mianadahy hafa nahitana kandida ho depiote ny iray izay mpaniraka, vehivavy mpampianatra ny iray izay mpanome basy ary olona 4 hafa, mpiray tsikombakomba.
Fantatra tamin’ny angom-baovao voaray hatrany fa ny lehiben’ny jiolahy iray, antsoina hoe Philibert, izay lavo tany Antsirasira Betrandraka tamin’ny fifandonana tamin’ ireo Zandarin’ny FIGN ny alin’ny 18 hifoha 19 marsa, ary nahafaty ilay Zandary iray teo dia isan’ny mpibaiko ireto mpaka an-keriny ireto, ny vehivavy sakaizany iray izay nampiatrano azy io dia isan’ireo voasambotra ihany koa. Hatolotra ny Fampanoavana ao Mahajanga ireo voarohirohy ireo. Mitohy hatreto hatreto ny fikarohana ny jiolahy mbola tsy hita popoka, isan’izany i Del kely.